Dowladda Soomaaliya oo laga dalbaday dhowrista xoriyada hadalka. - Awdinle Online
Dowladda Soomaaliya oo laga dalbaday dhowrista xoriyada hadalka.
April 21, 2020 (Awdinle Online) –Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay in Wasiirka 1 aad ee Xukumada Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ka hadlay Xoriyada hadalka iyo helitaanka Macluumaadka Wariyayaasha Howlgalada Soomaaliya.
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Amb Nicolas Berlanga ayaa sheegay in kulan Muuqaal ah oo Xubnaha Beesha Caalamka la qaateen Xasan Cali Kheyre Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya uu kala hadlay Xoriyada hadalka.
“cambaareynta waa qeyb ka mid ah hanaanka dimuqraadiyadda. Xadaynta Xoriyadda Hadalku ma noqon karo masiibo kale” ayuu safiirku daabacay bartiisa Twetter-ka ka dib kulan dhanka Internet-ka oo uu la qaatay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Amb Nicolas Berlanga oo hadlaya ayaa yiri “Haddii saxafiyiinta sameeyaan macluumaadka qaldan, xabsi ama xiritaan ma ahan khiyaar ”.
Safiirka ayaa xubnaha beesha Caalamka kula taliyay in ay sii wadaan wadashaqaynta, isku duwidda, dadaallada wadajirka ah ee lagu xakamayno xanuunka Coronavirus oo maalinba maalinta ka dambaysa ku sii faafaya Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay caburin ku hayso Saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan, iyada oo Urada Saxaafada ay ka dalbadeen Dowladda Faderaalka Soomaaliya in ay sii dayso wariye Maxamed Cabdiwahaab Ajuuba in ka badan 46 maalin u xiran hay’adda Nabad sugida Soomaaliya.
Previous articleHoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo xaaladiisa caafimaad laga deyrinayo
Next articleQarax miino oo lala eegtay Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda